जनमोर्चा गण्डकी अध्यक्ष बराल भन्छन् : शाहीलाई भेट्न जादा डा. बद्रीले उहाँ मर्न पनि सक्नुहुन्छ भने (भिडियो सहित) – Kendra Khabar
जनमोर्चा गण्डकी अध्यक्ष बराल भन्छन् : शाहीलाई भेट्न जादा डा. बद्रीले उहाँ मर्न पनि सक्नुहुन्छ भने (भिडियो सहित)
२०७८, १५ बैशाख बुधबार १९:१०
गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै सार्वजनिक माग गर्न जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले निवेदन हालेपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरी केही समयका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल चलिरहेको आजको र्बैठक खाजा खानको लागि केही वेरका लागि स्गगित भएको थियो त्यस पछि पुन बस्न सकेन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम बहादुर शाही बैठकमा उपस्थित नभए पछि जनमोर्चाकी सांसद थापाले संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
जनमोर्चाका संसदीय दल नेता कृष्ण थापाले साढे एक बजे सम्म सम्पर्क रहेको र संसद बैठकमा आउछु भनेको तर पछि सम्पर्क नभएको जानकारी दिए । थापाले भने । संसदमा उहाँको बोल्ने विषय थियो पछि फिर्ता लिनु भयो ।
अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदात गर्ने दलको सांसदनै बैठकमा उपस्थित नभए पछि अनेक आशांक गरिएको थियो । पछि उनी अस्पतालमा रहेको सुचना उनका सार्वजनिक भएको थियो । सांसद खिमविक्रम शाही पोखराको चरक मेमोरियल हस्पिटलमा भर्ना भएको पाइएको छ ।
अस्पतालका डा. बद्री पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । सांसद शाहीलाई कोरोनाका बिरामी राख्ने कक्षमा राखेर उपचार गरिएको छ ।
बैठकमा सांसद उपस्थित नभए पछि सत्ताको खेल भएको कांग्रेसले आरोप लागाएको छ । बैठक सहजरुपमा अगाडी बढाउने सहमती थियो सांसद अहिलेसम्म सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँको खोजि गर्नु प्रमुख कर्तब्य रहेकाृ कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।
नेकपा मओवादीका संसद दिपक कोइरालाले सांसद अनुपस्थित र सम्पर्कमा रहे पछि जनमोर्चाले निवेदन दिए पछि बैठक स्थगित हुन पुग्यो यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयर्थ पेश गर्ने समयमा उहाँले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।
अस्पतालमा कसैलाई पनि भेटेन दिइएको छैन ।उनलाई भेट्न गएका जनमोर्चा कास्कीका अध्यक्ष शंकर बरालले अस्पतालले हेर्न पनि नदिएको गुनासो गरे उनी अस्पताल वाहिर शाहीको अवस्था वारे जानकारी लिन छटपटी रहेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गदै उनले अवस्था वारे जानकारी लिन पाउनु पर्ने भने पनि अस्पतालले रोकेको बताए ।
चरक अस्पतालका डा. बद्री पौडेलले उहाँ मर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेको बरालले बताए । आफुलाई भेट्न नदिइएको उनले गुनासो गरे । कोभिड–१९ भएको अस्पतालले जवाफ दिए पनि भेटेन नदिएको उनले बताए । एउटा सडेन्त्र भित्र काम भएको उनले आक्रोस पोखे ।